ISharks seyiphenduke isinkwa semihla seBulls - Impempe
ISharks seyiphenduke isinkwa semihla seBulls
June 12, 2021 Impempe.com
ICell C Sharks iphinde yahluleka yancama ukushaya iVodacom Bulls ngesikhathi iguqa ngo 34-22 emdlalweni obekumele iwuwine kwiRainbow Cup SA, eJonsson Kings Park, ngoMgqibelo.
Bese kungokwesibili iSharks ithelwa induku yiBulls kulo mqhudelwano njengoba ishaywe ngo 43-9 emzuliswaneni wokuqala ePitoli.
ISharks ibingebukhali nakancane uma iya phambili futhi yenze inqwaba yamaphutha aholele ekutheni iBulls ishaye ama-try kalula. IBulls ibilokhu ihamba phambili kulo mdlalo njengoba uMorne Steyn eshaye amaphenathi amabili asheshayo ngomzuzu ka-18 noka-25.
ISharks izamile ukubuya ngomzuzu ka-28 ngesikhathi uJJ van der Mestch eshaya itry, uCurwin Bosch waqedela nge-conversion kwaba ngu 7-6.
Nokho iBulls isheshe yaphendula, uCornal Hendricks eshaya itry ngomzuzu ka-35, kwaba ngu 13-7. UBosch ushaye iphenathi ngomzuzu ka-39 kwaba ngu 13-10 zaya ekhefini kuhamba kanjalo.
Ngesiwombe sesibili iBulls iqhubeke lapho igcine khona uDavid Kriel eshaya itry, kwacaca ukuthi isibaleka nawo umdlalo ngomzuzu ka-50. Bese kugqame ukuvuleka emuva kwiSharks nenqwaba yamaphutha. USiya Kolisi ulibuyisile ithemba eqenjini lasekhaya eshaya itry ngomzuzu ka-53.
Ngemuva kwalokho kuvele kwabheda kakhulu uStravino Jacobs eshaya itry yeBulls ngomzuzu ka-56. Kuvele kwaphela ngeSharks ngomzuzu ka-61 uJanko Swanepoel eshaya itry yesine yeBulls nokuyinto obekumele liyigweme leli qembu laseThekwini.
I-try yokugcina yeSharks ishaywe ngu-Anthony Volmink kodwa bese kuvele konakele ngoba ibilandela emuva kakhulu. Futhi ibhonasi ibisiqisekisile ukuthi iBulls izoqeda phezulu.
Ukuwina kweBulls kuchaza ukuthi iqede phezulu kwiRainbow Cup SA futhi yilona iqembu elidlale kahle kakhulu kulo mqhudelwano njengoba usuphethiwe kuleli.
IBulls izobhekisa amabombo e-Italy lapho izodlala khona umdlalo wamanqamu njengompetha baseNingizimu Afrika.
Ngasohlangothini lweSharks uSean Everitt kumele abuyele emuva neqembu lakhe, azame ukulungisa amaphutha njengoba igcine iqede endaweni yesithathu yize iwuqale kahle umqhudelwano.
Previous Previous post: Kugqame uRabada amaProteas eshaya kalula iWest Indies
Next Next post: Ivuke ngewini yokuqala iDurban Ladies kwiSuper League